Kedu otu amphibians si mụta nwa, njirimara na otu ha dị. | Azu
Carlos Garrido | | Ndị Amphibia
Ndị Amphibia ha bụ ụmụ anụmanụ na ụmụ anụmanụ E ji akpụkpọ anụ ha mara ha, na-enweghị akpịrịkpa.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe nzuzo niile nke anụmanụ ndị a, bido na mmeputakwa nke amphibians, ụdị amphibians ndị dị adị, ụfọdụ ihe atụ na ọchịchọ ịmata ihe ndị ọzọ ga-abara gị ezigbo uru.
1 Mmeputakwa nke ndi amphibians
2 Anụmanụ Amphibian, gịnị ka ha bụ?
3 Ampdị amphibians
4 Njirimara Amphibian
5 Ihe Nlereanya nke amphibians
5.3 Ọkpụkpụ anụ (Bufo bufo)
Mmeputakwa nke ndi amphibians
Ịbụ ndị na-egbu egbu, mmeputakwa nke amphibians ọ bụ maka akwa. Anụ na-akpụ akpụ na ụmụ anụmanụ na-amụpụta site na njikọta nwoke (n'ime nwanyị) ebe amphibians na-eme ihe mpụga Fertilization.
La amphibian fatịlaịza pụtara na mmiri ọhụrụ, n'ihi na ụdị mmiri a ga-abụ nke na-echekwa akwa ahụ mgbe ha na-etolite ma na-enye ohere ka ndị amphibians ghara ịchọrọ mgbakwunye embryonic, dị ka akpa amniotic ma ọ bụ allantois, ya mere ụfọdụ njirimara ndị dị iche na ndị ọzọ amphibians vertebrate vertebrate.
Fatịlaịza gaa na mpụga na-esote usoro njirimara: nwoke na-ejide nwanyị, onye na-etinye akwa. Ka ndị a na-apụta, oke na-aga na-awụsa ha spam ma na-azụ ha. Àkwá ndị ahụ na-adị n’ime mmiri na-akpụ ụdọ ma ọ bụ jikọta ha na ahịhịa mmiri. Mmiri mmiri dị na mmiri si na ha pụta ọzọ.
Ma na azụ na amphibians, nke njikọta spam na-eme mpụga, àkwá ndị ahụ nwere mkpa ihe mkpuchi, ebe ọ bụ na spermatozoa ga-agafe ya ka njikọta spam na-ewere ọnọdụ. N'ihi nke a, àkwá ndị a ga-etinye n'ime mmiri glued ọ bụla ọzọ, na-akpụ voluminous ụyọkọ.
Amphibians mụrụ dị ka a aquatic larva na-akpụ akpụ na ọdụ na-agba ume site na gills. Mgbe nwa ahuhu, nke a na-akpọ tadpole, toro nke ọma, ọ na-enweta usoro nke ngụkọta metamorphosis. Ewezuga ụfọdụ ụdị awọ awọ mmiri ozuzo, njirimara ndị a ga-emesị pụọ n'anya ma jiri ngụgụ na ụkwụ dochie anya ka tadpoles na-eto.
Klas a nke amphibi vertebrate mejuputara awọ, toads, salamanders na ndị bi na mmiri. Ndị amphibians a nwere ikike ibi ma na mmiri, n'agbanyeghị na ọ dị ha mkpa ịdị na-adị mmiri mmiri oge niile dịka ọ bụ ụzọ ha si eku ume.
Anụmanụ Amphibian, gịnị ka ha bụ?
Na Latin okwu amphibian nwere pụtara iche, ọ pụtara n'ụzọ nkịtị "ndụ abụọ". Nke a bụ oké peculiarity nke anụmanụ ndị a, nwere ike imeghari na-ebu ha ndu ndu ọrụ ihe ndi ozo di iche iche: ala terrestrial na mmiri mmiri. Agbanyeghị, anyị ga-abanyetụkwu na ihe amphibian pụtara.
Ndị Amphibians bụ akụkụ nke nnukwu ezinụlọ ahụ dị ndụ ndị nkewa dịka vertebrates (ha nwere ọkpụkpụ, ya bụ, ọkpụkpụ dị n'ime) anamniotes (Embryo gị na - envelopu anọ dị iche iche: chorion, allantois, amnion, na nkochi ime akwa, na -emepụta ebe mmiri nwere ike iku ume na iri nri), tetrapods (ha nwere aka na ụkwụ anọ, na-ekugharị ma ọ bụ na-emegharị anya) na ebe obibi (Ha nwere ahu aru ha na agbanwe).
Ha na-ata ahụhụ oge a na-akpọ metamorphosis (mgbanwe nke ufodu anumanu n’ahu n’oge omumu ihe omumu na nke n’ahu ma mophology ha na oru ha na ndu ha). Otu n'ime mgbanwe ndị pụtara ìhè enwerela bụ gills (novices) gaa n'akpa ume (ndị okenye).
N'ime nnukwu ezinụlọ a nke amphibians mejupụtara, anyị nwere ike ịme obere nhazi dabere na iwu atọ: anurans, ihebueze o urodelos y apodal o mgbatị ahụ.
na anurans Ha bụ ụdị nke amphibians ndị e jikọtara ọnụ na ndị amphibians niile ahụ anyị maara nke ọma dịka awọ na toads. Kpachara anya, frog na toad abụghị otu ụdị. Ejikọtara ha site na myirịta omume na omume ha.
na urodelos Ha bụ ụdị amphibi ndị ọzọ dị iche site na ịnwe ọdụ ogologo na akpati ogologo. Enweghi ike mebe anya ha nke oma ma akpụkpọ anụ dị mma kpuchie ya. Ebe anyị na-ahụ newts, salamanders, proteos na mermaids.
N'ikpeazụ, e nwere ụdị nke ndi apodal amphibians, nke kachasị dị iche na nke ha niile n'ihi ọdịdị ha. Ha na-eyi anya irighiri ma obu nsi ala n'ihi na ha enweghi aka na aka ha di ogologo.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, amphibians bụ ụmụ anụmanụ na-eme vertebrate, ha nwekwara "oke" ịbụ ndị oge ochie nke umu anumanu a bi na uwa. A na-ekwu na ha anọwo ihe dị ka nde afọ 300, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla!
Ha nwere aka na ukwu anọ: abụọ n’ihu na abụọ n’azụ. Ndị a aka na ụkwụ na-mara site na pụtara ìhè aha quirido. A na-ahụ quiridus site na ịnwe morphology yiri aka mmadụ, nwere mkpịsị aka anọ na ụkwụ ụkwụ n'ihu yana ise na azụ. Ọtụtụ amphibians ndị ọzọ nwekwara ọdụ nke ise yiri aka.
N'ịbụ ndị dị ndụ nke ọbara oyi, ahụ ha na-adabere, na nke ukwuu, na gburugburu ebe ha nọ, ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịchịkwa okpomoku ha. Nke a bụ otu ihe kpatara ike ịgbara ike nke dugara ha ime mgbanwe maka ndụ na mmiri na ala. Usoro abụọ a na-enyere gị aka izere ikpo oke ọkụ ma ọ bụ ịju ahụ gị.
ya acha uhie uhieka ha na-amịpụta akwa. Nwanyị na-ahụ maka ịdebe akwa a ma ọ na-eme ya mgbe niile na gburugburu mmiri, n'ihi ya, ụdị ndị a na-eto eto nwere sistem iku ume nke nwere akpịrịkpa.
Akpụkpọ ahụ nke ntule bụ kwesiri ntughari, inwe ike ịgafe site na ụmụ irighiri ihe dị iche iche, gas na ihe ndị ọzọ. Speciesfọdụ ụdị nwere ike izoputa ihe na-egbu egbu site na akpụkpọ ha dịka usoro nchekwa megide ihe egwu ndị dị na mpụga.
Ọbụna ilekwasị anya na akpụkpọ ahụ gị, ekwesịrị ịdeba na nke a bụ keguru mmiri na depopulated na akpịrịkpa, n’adịghị ka ụdị anụmanụ ndị ọzọ na-ebu ha. Ọnọdụ a na-enye ha ohere ịmịkọrọ mmiri nke ọma yana, n'ihi ya, ikuku oxygen. Kama nke ahụ, ọ na-eme ka ha dị nro nke usoro akpịrị ịkpọ nkụ. Ọ bụrụ na amphibian nọ na gburugburu ebe iru mmiri dị ala, akpụkpọ ya ga-akpọnwụ ngwa ngwa, nke nwere ike ibute nnukwu nsogbu na ọbụna ọnwụ.
Animalsmụ anụmanụ ndị a nwere usoro ọbara ji arụ ọrụ nke akụkụ ya bụ a obi aghụghọ mejupụtara abụọ atria na ventricle. A na-emechi mgbasa ya, okpukpu abụọ na ezughi oke.
Anya na-abụkarị oke na, kama, bulging, nke na-enyere a nnukwu echiche dị nnọọ mma mgbe ị na-achụ nta nwere ike ịbụ anụ oriri. Enwere ndị dị ka newts.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ya, amphibians ha nwere ezé, ọ bụ ezie na ndị a dị obere. Ọrụ ya bụ inyere aka ijide nri. Ire ahụ na-aghọkwa ngwá ọrụ zuru oke iji jide obere anụmanụ ndị ọzọ. Ha na-ewetara a tubular yiri afo, nke nwere eriri afọ dị mkpụmkpụ, akụrụ abụọ, na eriri afọ mamịrị.
Ihe Nlereanya nke amphibians
Ka ọ dị ugbu a, e nwere katalọgụ gburugburu ụfọdụ Ndi umu amphibians 3.500. Agbanyeghị, ndị sayensị, na atụmatụ ha, na-ebu amụma na ọnụọgụgụ ọnụ ọgụgụ nwere ike ịbụ gburugburu 6.400.
Mgbe anyị na-eche maka ndị amphibians, onyonyo frog ma ọ bụ toad na-apụta mgbe niile n’isi anyị, mana anyị nwekwara anụmanụ ndị ọzọ dịka newts na salamanders.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ ole na ole nke amphibians, ọ bụ ezie, n'ezie, enwere ọtụtụ ndị ọzọ:
Isdị salamander a makwaara dị ka axolotl ma ọ bụ purepecha achoque. O bu udiri udiri anumanu, ya bu na onwere ebe di. N'okwu a, ọ bi naanị na Zacapu Lagoon, nke dị na steeti Michoacán (Mexico).
Ihe bu ihe eji mara ya bu inwe aru kariri nkpa, nkpirikpi ọdụ na gills. Agba ya ma ọ bụ ọbara ọbara, gbakwunye na ntụpọ ojii ya nke na-agbatị n'akụkụ ahụ ya niile, na-eme ka ọ ghara ịhụ ya.
Anumanu a di na mpaghara Europe, karia na mgbago ugwu Spain na n’ebe owuwa anyanwu France. Ọ nwere ụcha ahịhịa ndụ na-esonyere ya nke na-acha nnọọ ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na mgbakwunye, a na-agabiga azụ ya site na akara dị iche iche na-acha uhie uhie.
Ọkpụkpụ anụ (Bufo bufo)
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na mpaghara Europe dum na akụkụ Eshia. Na-ahọrọ ebe obibi nke mmiri na-asọ asọ, ebe mmiri gbara, wdg. Ikekwe, iguzogide ọnọdụ ibi ndụ na mmiri na-adịghị ọcha emeela ka ọ bụrụ otu n'ime amphibians kachasị gbasasịa na ama ama. O nweghi agba na-enwu gbaa, kama kama akpụkpọ ahụ ya bụ nke "na-acha ka oji", nke ọtụtụ ọkpụkpọ kpuchiri n'ụdị waatị.
Dị ka ndị ikwu ya kwuru n'elu, amphibian a emekwaala Europe na Eshia obibi. Ọ bụ ezie na ọ na-ahọrọ ebe ndị dị mmiri mmiri, frog a na-etinye oge ka ukwuu na mmiri. Ọ bụghị nke otu agba agba edozi, mana onye ọ bụla nwere ike igosipụta agba dị iche iche. N’agbanyeghi nke a, akpụkpọ aja aja nwere obere ntụpọ na-ebukarị ụzọ. Afọ doro anya bụ otu n’ime njirimara ya.
Ndi amphi na-egbu egbu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » ndị ọzọ » Ndị Amphibia » Ndị Amphibia
Arụrụ n'ụlọ azụ nri